Home News Muranka Magacaabista Gudomiyeyasha Dagmoyinka oo Weli Ka Dhex Taagan Madaxtoyada Iyo Xarunta...
Muranka Magacaabista Gudomiyeyasha Dagmoyinka oo Weli Ka Dhex Taagan Madaxtoyada Iyo Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar
Iyado Raiisul Wasaare Kheyre uu maalmahan danbe wado magacabista saxibada dhaw iyo shaqsiyadka qaraabada dhaw la ah ayay wararku shegayan in haatan ay isku qilaafeyn duqa muqdisho magacaabista shaqsiyad uu wato kheyre.
Inkastoo dibada u soo bixin khilaafka ayaa hadana waxaa la sheegayaa inuu socdo wada hadal u dhaxeeya Labada mas’uul oo Arrintaan ku aadan.
Waxyaabaha la isku qilaafsan yahay aya ah Ra’iisal wasaare Kheyre oo doonayo inuu Guddoomiyeyaal degmo oo isaga jeebkiisa magacowdo halka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Osmaan Yariisow uu dalbaday in isaga Arrintaan loo madax banaaneeyo si uu uso xulo gudomiyeyaal degmo oo badala kuwa haatan.
Liis magacyo ah oo uu Guddoomiyeyaal degmo oo uu wato Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa farta laga saaray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir,waxana wararku ay shegeyan in ila 8-magac uu gudbistay Rw.Kheyre.
Dhawan aya la filaya in duqa muqdisho uu magacaabo gudoomiye yaal cusub oo badala kuwa haatan oo uu kensaday duqi hore ee muqdisho,waxana magaalada muqdisho si weyn loga daremaya qorshahan lagu kala doonayo in masuul waliba dhankiisa uu badsano shaqsiyadka uu ku yelanayo gudomiye yaasha cusub,loolan xoogan ayana jira liisas kala duwan ayana xafiiska duqa muqdisho uga imaada dhanka madaxtoyada oo loolanka si weyn isugu garbinaya.